Kuboshwe oqola ngegama leMeya yeTheku - Bayede News
Kuboshwe oqola ngegama leMeya yeTheku
OKlebe basongela iMeya kwelezigidi zemali
Afunwa uthuli amaqola okuthiwa asebenzisa igama leMeya kaMasipala iTheku alutha abantu imali ebathembisa amathenda.
NgoMgqibelo kuboshwe umsolwa oneminyaka yobudala engama-28 obezenza iMeya uMxolisi Kaunda, efuna imali eyizi-R2000 kowesifazane abemthembise ukuthi uzothola ithenda yezigidi zamarandi aphinde abengunkosikazi weMeya.
Umsolwa uvele namhlanje enkantolo kanti uboshwe eseyolanda imali kwenye yamarenki amatekisi eThekwini okuyilapho abethe kulo wesifazane akayibeke khona ngoplastiki omnyama.
IMeya uKaunda ithe amaphoyisa asezithendeni zabanye abaqola ngegama layo ezinkundleni zokuxhumana, bethembisa abantu imisebenzi kaMasipala engekho.
“Lo muntu wagebenga inombolo yami yocingo nokuyiyo abeyisebenzisa ukushayela abantu ebathembisa imisebenzi namathenda bese ethi abakhokhe imali ethile kuqala. Ngikushayela ihlombe ukuzikhandla kwamaphoyisa okugcine ekutheni kuboshwe lo msolwa. Ngisasho namanje ngithi angisoze ngisebenzise izinkundla zokuxhumana ukukhangisa imisebenzi kaMasipala. Ngakho ngihlaba ikhwelo ukuthi abantu uma bebona okusolisayo basheshe basukume babikele amaphoyisa ukuze azibophe izigilamkhuba,” kusho iMeya uKaunda.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel uThembeka Mbhele, uthe lona wesilisa ubefuna kuthi imali ifakwe emgqomeni kadoti ngoplastiki omnyama erenki yaseMakethe, eThekwini.
“Owesifazane obeqolwa uqale ukusola ngesikhathi sekuthiwa akalethe imali eyizinkulungwane ezingama-R200 ngoplastiki omnyama afike ayishiye erenki. Ube esebikela amaphoyisa aseBerea Centre. Amaphoyisa acuphele lona wesilisa umgoga wabanjwa kanjalo eseyothatha imali,” kuchaza uCol uMbhele oveze ukuthi umsolwa ubekwe icala lokulutha imali.
Kwenzeka lokhu nje ngesonto eledlule kuMasipala iNewcastle kuthiwa owesilisa ungene emahhovisi alo Mkhandlu wathatha ibhokisi ebelinezicelo zomsebenzi washaya wachitha nalo.
nguCelani Sikhakhane Sep 28, 2020